प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग एसएलसीका प्रमाणपत्र पनि दुइटा, कम्तिमा एउटा किर्ते
[2018-02-11 오후 9:41:00]
दुइटा नागरिकता विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग एसएलसी प्रमाणपत्र पनि दुइटै रहेको प्रमाण प्राप्त भएको छ। तीमध्ये कम्तिमा एउटा किर्ते बनाएको देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागारिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवाद धैरै अघिदेखि ‍चल्दै आए पनि अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतकै छानबिन दायरामा छ।
डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले पराजुलीका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ। अदालतको छानबिनमा बल पुगोस् भनेर केही सातादेखि सेतोपाटीले पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र निरन्तर खोजी गरिरहेको छ। खोजी क्रममा उनीसँग एसएलसीका दुइटा प्रमाणपत्र रहेको तथ्य खुलेको हो।
पराजुलीको उमेर, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतासँग जोडिएको मुख्य प्रश्न उनले कुन विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेका हुन् र एसएलसी पास गर्दा विद्यालय रेकर्डमा उनको उमेर कति थियो भन्ने हो।
एसएलसी प्रमाणपत्रमा पराजुलीको जे उमेर छ, सिद्दान्तत: त्यही उमेर त्यसपछिका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कायम रहन्छ। नागरिकतामा पनि एसएलसी पढ्दाकै उमेर रहन्छ। यस्तो हुन्थ्यो भने उनको उमेर विवादमा पर्ने थिएन।
सतहमा उनको नागरिकताको उमेरमा विवाद देखिए पनि मूल विषय शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेका फरक उमेर हुन्। अझ एक तह गहिरिएर हेर्ने हो भने, उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र सही हुन् वा नक्कली भन्ने मूल विषय हो।
पछिल्ला दुई सातामा हामीले पराजुली पढेका र एसएलसी दिएका चितवन र वीरगन्जस्थित दुई विद्यालय पुग्यौं। काठमाडौंमा सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र त्रिविमा पराजुलीका एसएलसी र आईएल पढ्दाका शैक्षिक प्रमाणपत्र खोतल्यौं।
त्यसै क्रममा विद्यालय रेकर्डमा रहेको उनको जन्म मिति पहिलोपटक पत्ता लाग्यो।
वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट उनले २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेको सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ। उक्त रेकर्डअनुसार उनको जन्म मिति २०११ वैशाख १३ गते हो।
योसहित सरकारी रेकर्डमा पराजुलीका चार जन्म मिति रहेको समाचार हामीले गत साता नै सेतोपाटीमा प्रकाशित गरेका थियौं।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको रेकर्डमा रहेको उनको जन्म मिति २०११ वैशाख १३ गते नै पराजुलीका त्यसपछिका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किन कायम भएनन्? किन नागरिकतामा यो जन्म मिति लेखिएन? जबकि, यो जन्म मितिअनुसार सर्वोच्च अदालतमा पराजुलीको सेवा अवधि अझै लामो हुन्थ्यो। यो उमेरअनुसार २०७६ वैशाख १२ गतेसम्म उनी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गर्न पाउँथे। पछिल्लोपटक सर्वोच्चमा कायम उनको उमेरअनुसार पराजुली आउँदो वैशाख १५ गते सेवानिवृत्त हुँदैछन्।
त्रिविमा आईएल पढ्दा पराजुलीले एलएलसीको कुन प्रमाणपत्र बुझाएर भर्ना भए भनेर हामीले खोज्यौं। वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट एसएलसी पास गरेको प्रमाणपत्र उनले त्रिविमा बुझाएका छैनन्। आईएल पासको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उनको उमेर २०१० वैशाख १६ गते लेखिएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको एसएलसी प्रमाणपत्र त्रिविमा बुझाएको भए उनको उमेर २०११ वैशाख १३ गते नै कायम हुन्थ्यो।
त्यसो भए, उनी एसएलसीको कुन प्रमाणपत्र बुझाएर त्रिवि भर्ना भए?
पराजुलीले त्रिविमा बुझाएको शैक्षिक प्रमाणपत्र रेकर्ड हामीले अहिलेसम्म भेट्टाएका छैनौं। तर, पराजुली आईएल भर्ना हुँदा त्रिविको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ सेतोपाटीले प्राप्त गरेको छ। उक्त रिपोर्टमा पनि पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते लेखिएको छ। रिपोर्टमा पराजुलीले एसएलसी पास गरेको जुन विवरण उल्लेख छ, त्यो चकित पार्ने खालको छ।
रिपोर्टको अन्त्यमा पराजुलीले कुन विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेको भन्ने उल्लेख छ। त्यसअनुसार पराजुलीले शारदा माध्यमिक विद्यालयबाट २०२६ सालमा एसएलसी पास गरेका हुन्। उनको एसएलसी सिम्बल नम्बर ११७ लेखिएको छ। जबकि, शारदा मावि चितवनको रेकर्डले उनले एसएलसी पास गरेको देखाउँदैन। २०२६ सालमा उनले त्यहाँबाट जाँच दिएका हुन्, तर फेल भएका हुन्।
त्रिवि प्रोग्रेस रिपोर्टमा लेखिएको सिम्बल नम्बर ११७ पराजुलीले शारदा माविबाट एसएलसी दिँदाको सिम्बल नम्बर होइन। सेतोपाटीलाई प्राप्त शारदा माविको रेकर्डमा पराजुलीको सिम्बल नम्बर ‘१०८६८ जेड’ उल्लेख छ।
११७ सिम्बल नम्बर पराजुलीको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ पढ्दाको हो। त्यो बेला उक्त विद्यापीठ एसएलसी बोर्डमा नभए पनि सरकारले एसएलसीसरह मान्यता दिएको थियो। त्यसैले त्यहाँको सिम्बल नम्बर फरक प्रकारको थियो।
त्रिवि प्रोग्रेस रिपोर्टमा पराजुलीले एसएलसी पास गरेको विद्यालय भनेर दुइटा फरक स्कुलका विवरण समेटिएका छन्। यी फरक विवरणले पराजुलीले त्रिविमा बुझाएको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किर्ते गरेको प्रस्ट संकेत गर्छ। यसले पराजुलीले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट एसएलसी पास गरेको पनि शंकाको घेरामा पारेको छ। उनले उक्त विद्यापीठबाट २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेका भए २०३१ सालमा त्रिविमा भर्ना हुँदा त्यही शैक्षिक प्रमाणपत्र किन बुझाएनन्?
शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवाद उठ्दा उनी विद्यापीठको लब्धांकपत्र सार्वजनिक गर्ने गर्छन्, तर विद्यापीठकै चारित्रिक प्रमाणपत्र आजसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्, जसमा उनको जन्म मिति उल्लेख छ। आफ्नो नागरिकतामा पछिल्लोपटक सच्याएको उमेर २०१० वैशाख १६ गतेलाई पुष्टि गर्न उनले आईए पढ्दाको प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आईए पढ्दाको जन्ममिति कहाँबाट आयो भन्नेबारे अहिलेसम्म उनले कुनै पनि निकायमा प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन्।
न्याय परिषदमा उनका तीनवटा जन्ममिति भेटिपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एसएलसीकै प्रमाणपत्र हेर्न खोजेकी थिइन्। न्यायाधीशहरुको अभिलेख हुने ठाउँमा पराजुलीका शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र भेटिएनन्। त्यसपछि कार्कीले तत्कालीन परिषद सचिवलाई पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र खोजेर पेस गर्न आदेश गरेकी थिइन्। उक्त आदेशपछि पराजुलीले बुझाएका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विद्यापिठले दिने चारित्रिक प्रमाणपत्र थिएन।